Ahụmahụ Semalt: Olee otú ị ga-esi merie mmegide Cyber ​​ọjọọ
Na narị afọ nke 21, nchekwa nke weebụsaịtị na ngwa weebụ dịbụrụ nchegbu kachasị na ụwa dijitalụ. Ụlọ ọrụ niile na-azụ ahịa na-eji nkà na ụzụ eme ihe na-adighi ike na nsogbu a.Ufodu ulo oru a enweela ugbua nke Cyber ​​Attacks ebe ndi ozo na-aga n'ihu n'ile ihe n 'onwa ogugu n' Intanetnke hackers.
Frank Abagnale, Onye Ọrụ Ndị Nlekọta Ndị Na-ahụ Maka Ahịa nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, na-achọ ileba anya na ụlọ ọrụ ịntanetị na esi egbochi Cyber ​​Attacks nke ngwa weebụ ha ma ọ bụ weebụsaịtị - castrol ee. Ọzọkwa,Atụmatụ ndị dị mkpa nke ụlọ ọrụ nwere ike ime ka ha mezie ihe nchekwa ha ka egosikwa. Na njikọ a, ọ bụ ihe kachasị mkpana-aghọta na ọbụna nnukwu ụlọ ọrụ nwere ike ịmetụta hacking. Dịka ọmụmaatụ, a tụrụ Zamoto n'isi afọ a,na nzuzo ya na ndị ọrụ 'nchekwa data jiri ndị omempụ mee ihe na-ezighị ezi. Ya mere, olee otu ị ga - esi chebe ebe nrụọrụ weebụ gị si na Cyber ​​Attacks?
Iji malite, jiri ngwa na ngwanrọ emelitere. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị nwe ụlọ ebe niilenụrụ banyere Magento, Joomla, na WordPress nke nwere nwelite nhọrọ nke chọrọ ntinye nke bọtịnụ ibudata ma ọ bụ bipụta ọhụrụplugins na nsụgharị. N'ebe a, ndị na-emepe ihe na saịtị na ndị ọrụ na-adọ aka ná ntị maka ịhọrọ nkwụnye ego dị ala ebe ọ bụ na ndị mmegide nwere ikeama ụma kere ha na-eleta hacking na ebe nrụọrụ weebụ. CMS (Content Management Systems) obodo dịka WP (WordPress) naMagento arụtụbeghị ọrụ iji kwụsị saịtị. Ọzọkwa, ihe ntanetị ndị a na-aga n'ihu ịhapụ nchebe nchebe mgbe niileweebụsaịtị ndị ọzọ siri ike maka nchebe weebụ..Otu n'ime ebe kachasị mfe bụ ọrụ njikwa. Otú ọ dị, a na-adụ ndị ahịa n'ịntanetị ọdụJiri nchịkọta nchịkọta nchịkọta. Ụlọ ọrụ nhazi ahụ na-elekọta nchedo ncheta mgbe ị na-eji ngwugwu ahụ. N'ihi ya, azụmahịa nwere ike mgbe niilenọgide na-enwe nchebe pụọ na hacking.
Nchedo okwu na nche bụ nchebe nchebe nke abụọ maka weebụsaịtị. Onlinendị ọrụ kwesịrị ịmepụta na ịnọgide na-enwe paswọọdụ siri ike nke ederede pụrụ iche, mkpụrụ edemede, na ọnụ ọgụgụ nke mere na ọ dịghị onye nwere ike ịgbagha ha ngwa ngwa.N'otu akwukwọ ahụ, ndị nwe saịtị na ndị ọrụ nwere ike ịwụnye ụfọdụ ngwaahịa ndị Google jikọtara na-egbochi ịnara okwuntughe site na ndị ọzọ na ịntanetịngwa weebụ ma ọ bụ saịtị. Dịka ọmụmaatụ, ihe nchọgharị Chrome na-enye mgbatị a na-akpọ "Mgbasa Ozi Ntugharị", nke a nwere ike ibudata naarụnyere na ngwaọrụ ọ bụla.
Nke atọ, na-agba ọsọ ngwaọrụ na saịtị ahụ nke na-egbochi DDoS (Kwepụre Ịkpọ Ọrụ).DDoS bụ mmemme na-emepụta maka ndị na-egbu ihe na ndị spammers iziga okporo ụzọ dịgboroja na otu ebe nrụọrụ weebụ na-eme ka ọdịnaya ya ghara ịdị.Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke okporo ụzọ nke na-enweghị saịtị ọ bụla esitere n'ọtụtụ mmalite. N'ezie, ọ bụ ihe ize ndụ nwere ike ịnweta usoro niilendị niile na-ebute ọrịa na ndị agha Trojans na ndị na-awakpo na-eleba otu usoro n'otu oge. Google nwere ngwaahịa a na-akpọ GoogleShield Shield iji chebe weebụsaịtị ọhụrụ site na DDoS ọgụ. Ọrụ dị maka iji n'efu na-eji obere ụlọ ọrụ ntanetị n'ịntanetị,saịtị ọhụrụ, na ndi oru nta akuko onwe ha.
N'ikpeazụ, jiri sava weebụ nkesa raara onwe ya nye. Ihe nkesa raara onwe ya nye di nchebekarịa ịkekọrịta ihe nkesa weebụ yana ọtụtụ saịtị n'otu oge. Ọ na-egbochi onye nwe ụlọ site n'aka ndị iro na-eme ihe ọjọọotu saịtị iji kpoo weebụsaịtị ndị ọzọ ejiri na nkesa. Tụlee iji ọrụ ntanetị weebụ nke na-enye firewalls weebụ maka hasava sava.